Galmudug oo ka hadashay Saraakiishii lagu laayay Gobolka Galgaduud – AfmoNews
Galmudug oo ka hadashay Saraakiishii lagu laayay Gobolka Galgaduud
Maamulka Galmudug ayaa ka hadlay weerar gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Gobolka Galgaduud, laguna laayay Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka.
Saraakiishan ayaa ka soo laabtay tababar maanta Ciidanka Xoogga Dalka loogu soo geba-gabeeyay Xerada Harqaboobe ee Degmada Guriceel, waxaana la weeraray xilli ay ku sii jeedeen Degmada Balanballe.
Gaadiid ay la socdeen ayay maleeshiyo hubeysan ku weerartay tuulada Xafagooye, oo hoostagta Degmada Balanballe, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu laayay Saraakiil sar sare oo Ciidamada Dowladda ka tirsanaa. Wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in maleeshiyaad hubeysani ay jidka u gashay Saraakiishaasi.
Wasiirka oo la hadlay KNN ayaa xusay in Saraakiisha oo shan nin ahayd ay ku dhinteen weerarkaasi, isla-markaana ay dhab tahay in cidda weerarka gaysatay ay maleeshiyaad yihiin.
“Ilaahay samir iyo iimaan hanaga siiyo. Saraakiishaas waa Saraakiishii deegaanka oo difaacoodu u joogay, maleeshiyaadkaas ciidamada jidka u galayna waa xaqiiqo, kuli waa lagu dhintay. Nimanka Saraakiisha ah illaa shan nin bay ahaayeen.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Falaqle ayaa intaa ku daray in uu socdo baaritaan lagu baadigoobayo maleeshiyadii weerarka ka dambeysay, isla-markaana ay socdaan shirar looga arrinsanayo jawaabta kaga aadan weerarkaasi.
“Baaritaan xoog leh ayaa socdo, baaritaan keliya maahinee in gacan bira lagu soo qabto oo arrintaasi aad looga hortaggo, shirarkeeda iyo kala kacleynteeda caawa illaa Madaxtooyada hawl kale kama jirto, waana lagu hawlan yahay. Ciidamada iyo cid welibana hadda heegan ayay ku jirtaa iyo hawlgalkooda, marka hawshaas dee hawl fudud maaha.” Ayuu yiri Falagle.
Weerarkan ayaa noqonaya kiisii ugu khasaaraha badnaa ee Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka loogu gaysto gobolkaasi.